Cube Disinfection Cube - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
FAUCI Su'aalaha Kuubbada Nadiifinta Hawada
Sida loo isticmaalo sheyga?
Jawaab: Iska jar oo iska qaad baakadaha ku wareegsan Cube, waxaadna bilaabi kartaa inaad isticmaasho.
Waxaa lagu dhejin karaa miisaska, miisaska shirarka, miisaska qolka, miisaska ardayga, ama waa lagu qaadi karaa si aad jeermiska hawada u dhow waqtiga dhabta ah;
TWaxaa lagu ridi karaa sanduuqyada alaabta carruurtu ku ciyaarto, sanduuqyada sahayda, sanduuqyada wax lagu kaydiyo, oo si joogto ah jeermis ugu rid shayada sanduuqyada ku jirta;
TimeWaxaad ku qabsan kartaa gacmahaaga wakhti kasta si aad gacan uga geysato dilidda fayrasyada ama bakteeriyada laga yaabo inay ku sumoobaan gacmahaaga.
Si kastaba ha noqotee, 4 -tii Febraayo, 2020, Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray “Ogeysiiska Liiska Degdegga ah ee Qaar ka mid ah Daawooyinka Jeermiska ah inta lagu guda jiro Ka -hortagga iyo Xakameynta Cudurka Cusub ee Cudurka Sambabka ee Coronavirus”, jeermiska koloriin kaarboon ayaa lagu qorey alaab degdeg ah oo la isticmaalo ; 2020-kii Febraayo 19, Guddiga Caafimaadka Qaranka ee Shiinaha ayaa soo saaray "Tilmaamaha Isticmaalka Daawooyinka Jeermiska" si looga jawaabo cudurka faafa, kaas oo liis gareynaya jeermisyada kala duwan ee loo isticmaalo in lagu dilo COVID-19s. Liiskan, jeermis -dilaha koloriin ayaa lagu sheegay inuu ku habboon yahay jeermiska hawada.
Jawaab: Waqtigan xaadirka ah, inta badan badeecadaha la midka ah ee suuqa ku jira waxay dhab ahaantii isticmaalaan hypochlorite sodium-ka jaban (taas oo ah, alaabta ceeriin ee Disinfectant 84), oo soo saarta hypochlorous acid iyada oo loo marayo falcelinta nuugista biyaha, ka dibna waxay soo saartaa koloriin dioxide iyo qadar yar gaaska koloriinta sunta ah (Feejignaanta koloriinku waxay u baahan tahay oo keliya inay gaarto raad-raaca 0.001 mg/L si ay u keento sumoobid joogto ah, sidaa darteed aashitada hypochlorous looma adeegsan karo jeermiska hawada), ama si toos ah u isticmaal isla alaabta kaloriinta caadiga ah ee qaaliga ah si aad u nuugto biyo si loo sii daayo koloriin kaarboon. Marka hawo qoyan ay aad u sarreyso, waxaa laga yaabaa in feejignaanta si dhaqso ah loo sii daayo, oo dhuminta ayaa ku dhammaan doonta waqti gaaban.
Agabyada bakteeriyada ee la dhisay (maaddada FAUCI AAPG) ee ku jirta FAUCI cube jeermiska hawada waxay qaadataa tikniyoolajiyad firfircoon oo firfircoon iyo teknolojiyad teknolojiyad gaabis-sii-deyn ah oo madaxbannaan ay soo saartay shirkadeena, taas oo si tartiib tartiib ah oo xasilloon u sii deyn karta badbaado iyo hufnaan maaddooyinka kiimikada koloriin dioxide gaas ah iyo ROS ion oksijiin firfircoon muddo dheer.
Factor Qodobka jeermis -diidka ee FAUCI cube jeermiska hawada waa koloriin gaasiin gaas saafi ah iyo ion oksijiin firfircoon oo ROS ah, oo leh hufnaan iyo badbaadin jeermis sare; halka alaabooyinka kale aysan lahayn ROS oksijiin firfircoon, waxaana jiri kara gaas -biyood hypochlorous gaseous, koloriin iyo walxo kale oo sun ah oo uu mamnuucay taabashada bini'aadamka, taas oo aan lahayn oo keliya hufnaan jeermi -dilid, laakiin sidoo kale leh khataro badbaado;
Ube Cube jeermiska hawada ee FAUCI wuxuu leeyahay saameyn joogto ah muddo 3 bilood ah, halka alaabooyinka kale ay ugu badnaan yihiin 1-2 bilood.
Alaabtan ma ammaan tahay in loo isticmaalo dadka iyo duunyada?
Jawaab: Heerka raad-raac ROS ee oksijiin firfircoon oo laga soo saaray dusha sare ee lagu dhisay FAUCI AAPG Maaddada alaabtan waxay la mid tahay walaxda ugu muhimsan oo aan kala maarmi karin oo ku jirta jirka aadanaha oo disha fayrasyada iyo bakteeriyada. Sidoo kale waa walax dabiici ah waxayna ku jirtaa xadka raadraaca. Waa mid waxtar leh oo aan waxyeello u lahayn jirka aadanaha.
Isla mar ahaantaana, kubbadda jeermiska hawada ee FAUCI (alaabta lagu dhisay FAUCI AAPG) ayaa ka gudubtay imtixaankii CMA/CNAS ee habboonaa: gabagabada tijaabada sunta neefsashada oo ba'an ayaa lagu muujiyey inaysan sun ahayn; gunaanadka tijaabada micronucleus -ka unuggu dhammaantood waa taban yahay, taas oo macnaheedu yahay inaysan jirin isku -beddelidda unugyada unugyada iyo sumowga hidda -socodka;
Jawaab: - Ka digtoonow inaadan qoyan badeecada. Gaar ahaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga hortago taabashada dharka, maqaarka, iyo birta marka biyaha la soo gaadhsiiyo maadaama biyuhu ay dardar gelin doonaan hoos -u -dhaca wax -ku -oolnimada maaddada. Alaabta cusub dib ayaa loo iibsan karaa si waafaqsan.
Miyaan weli u baahanahay inaan xirto maaskaro haddii aan ku dhajiyo kube -ga jeermiska?